Aiza no handaniana antoko bachelorette?
Noho izany, manomana ny hetsika tena manan-danja sy maharitra ianao eo amin'ny fiainanao - amin'ny fampakaram-bady. Angamba ianao manapa-kevitra ny hanaraka ny fomba amam-panao sy hanomana fialantsasatra mifaly amin'ny namanao malalanao. Aiza no azoko anaovana akanjo mofomamy? Miankina amin'ny fanirianao sy ny fahaizanao izany rehetra izany. Ny tena zava-dehibe dia ny mikarakara ny fikarakarana ny renim-pianakaviana talohan'ny fampakaram-bady. Aza manao an'izany amin'ny alina alohan'ny fankalazana, raha tsy izany dia mety tsy ho ny fomba tsara indrindra amin'ny fetinao ny andro fety amin'ny andro fampakaram-bady.
Mialoha, miresaha amin'ireo namanao izay manomana ny antokom-bovoka, eritrereto ny safidy azo atao amin'ny fitazonana azy. Alefaso ny fanontaniana ara-bola, satria ho an'ny mpivady, ny fandaniana toy izany dia mety ho lehibe. Mendrika koa ny miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny lahy eo anatrehan'ny fampakaram-bady. Rehefa manapa-kevitra amin'ny drafitrasa azo antoka momba ny mari-pahaizana iray ianao, dia aza adino ny manomana izay rehetra ilainao mialoha.
Scripts ho an'ny antoko bachelorette
Manolotra soso-kevitra maromaro momba ny toe-javatra izahay, satria azo atao tsara ny manana fotoana tsara ho an'ny lanonam-behivavy:
Raha ny vadin'ilay tompom-bady no tompony ao an-tranony, dia afaka mandamina soa aman-tsara any an-trano ianao. Ny antoko bachelorette toy izany dia ho nentim-paharazana: tsy mila zavatra betsaka ianao - mametraka ny latabatra, manangona ny sipany ary mahatsiaro ireo tanora faly, ary mety hamela ny ranomaso mihitsy aza.
Angamba mety ho tianao ny "antoko pijama", ao anatin'izany atmosfera izany dia mora kokoa ny manambara sy maneho tena amim-pahatsoram-po. Noho izany dia hifampihetseham-po sy amim-pahatsorana ireo resadresaka fohy. Azonao atao ihany koa ny manomana amina komity na melodramas vitsivitsy, indrindra amin'ny lohahevitra fampakaram-bady. Ary toy ny fialamboly dia azonao atao ny manonon-tena, ny toerana mety dia hamorona labozia.
Ary ahoana ny tianao hatao amin'ny spa-salon any an-trano? Tsy afaka ny hanana fotoana tsara fotsiny ianao, fa ataovy koa ny tenanao alohan'ny fankalazana. Mividy mofomamy maromaro na labiera aromatika , cocktails mazava tsara, ary koa fitaovana rehetra ilaina sy fitaovana ho an'ny SPA.
Antoko Bachelorette ao amin'ny clubclub na bar
Amin'izao toe-javatra izao dia tsy ho afaka hiresaka ianao. Saingy hanana fahafahana lehibe haka fahafinaretana ianao. Dihy, mihira amin'ny karaoke, mandidy ny lalaon'ny lehilahy. Ny zava-dehibe - aza manao sary mifanintona, mety tsy ho tian'ny mpampakatra ilay izy. Ankoatra izany, aza hadino ny miala ao amin'ny tokantrano sakaiza.
Apetraho amin'ny akanjonao ireo akanjo marevaka, manaova fandokoana hariva ary mandamina latabatra amin'ny trano fisakafoanana tsara. Afaka any ianao ary afaka miresaka amin'ny rivotra mahafinaritra, ary mandihy, ary afaka manadaladala lehilahy lehilahy mahafatifaty izay mipetraka eo amin'ny latabatra akaiky.
Fety amin'ny sauna na ao amin'ny fandroana
Ity safidy ity mifanaraka amin'ny fomba nentim-paharazana Rosiana: tamin'ny andro taloha, ny ampakarina dia nandeha tany amin'ny trano fandroana niaraka tamin'ireo namany. Mametraha ora sasantsasany tsara ho an'ny sauna, indrindra raha misy dobo, billiards na karaoke. Azonao atao ny manasa fanariam-peo ho an'ny sauna, raha tianao ny zavatra mahagaga. Aza hadinoina ny fisotroana sy ny fihinana mora, ary koa fifaninanana izay hanampy anao handany fotoana amim-pifaliana.
Antoko Bachelorette amin'ny fiara sarobidy
Mametraha lamasinina mandritra ny ora vitsivitsy, indrindra amin'ny takariva na alina. Hatramin'ny adiny dimy ka hatramin'ny dimy ora dia ho ampy mihoatra noho izany ianao. Manaova sary mahafinaritra . Ary aza adino ny mitondra champagne sy snacks. Tiavo ny vakansinao!
Inona no hanomezana fampakaram-bady?
Inona no tokony hataoko raha manambana ny vadiko?
Ahoana ny fomba hanipazana lehilahy iray nefa tsy manafintohina azy?
Ahoana ny adinonao ny malalanao?
Ahoana ny fomba ifandraisana anjara amin'ny lehilahy iray tsy manafintohina azy?
Erica Herceg mialoha ny fahaverezan'ny lanjany
Ahoana no hanesorana ny ody eny amin'ny tongotra?
Miala amin'ny trano fiterahana amin'ny fahavaratra
Tarehimarika ho an'ny zana-ketsa
Mitafy akanjo lava
Rahalahy Julia Roberts
Fefy misy andry
Condylomata amin'ny vehivavy - ny antony
Ahoana no hananganana zaza iray isaky ny herintaona?
Bibilava amin'ny teny frantsay amin'ny oven
Ny fomba amam-panao any ivelany - akanjo fitaka no fototry ny lamaody